Ndezvipi zvinobatsira zvekugadzira mashandisirwo ekudzokera shure?
Ngatitangei nerudziro yekubatanidza hurongwa hwokuvaka. Kana iwe Google yezwi iri, uchawana runyora rwemashoko anogona kukubatsira kuchengetedza hukama, asi kwete kukuendesa kune huwandu hwekuvaka sangano.
Kazhinji kutaura, mazano aya anotsanangura pfungwa yekusika zvigadzirwa zvinokosha kuita mamwe mawebvu anowanzobatanidza iwe. Chimwe chirevo chingaitawo kuti chikwata chinosanganiswa chibatanidze - kuvaka hukama nehukama hwepakombiyuta; kukurudzira vatengi kuti vauye; share source mukati memunharaunda yako; inobatanidzwa muzviitiko zvepamutambo uye munharaunda.
Aya mazano ose ndeechokwadi uye anokosha kumasvingo ekuvakisa backlink. Zvisinei, vanongoratidzira chete zvikonzero zvinokonzerwa nei dzimwe nzvimbo dzewebhu dzingabatana neimba yako. Havana kupa mhinduro yakazara kumubvunzo wako, kupa hupakati chechirongwa.
Link building strategy inzira yekuzadzisa zvinangwa zvebhizimisi kuburikidza nehutaneti huripo. Gadzira chivako chekuvaka sarudzo semuchenjeri nokuti chinangwa chenyu chekupedzisira apa chinotarisana nekuita. Zvisinei, hazvigoneki kuwana chigumisiro pasina nzira yakarurama. Kana zvisina kudaro, hukama hwakachengeteka hunogona kana husingashandisi sezvinangwa zvako zvebhizimisi chaiyo.
Nyaya ino inopihwa nenzira yakarurama kune SEO mazano ekuvakira mazano. Ngatitangei nechinangwa chako chekuvaka chikwata chekuvaka chinangwa chinofanira kutaridzika.
Zvikonzero zvinoita kuti nzvimbo yako inoda maitiro ekugadzira backlink
Ita kuganhurana pakati pehuwandu hwewebhu
Zvakajeka kuti webhusaiti yega yega pasinei nekutungamira kwayo uye kukura kunoda backlinks. Kune chikamu chinokosha cheIndaneti masangano. Zvisinei, sei tichida kunze kwekubatana?
Pane zvikonzero zviviri zvinokosha zvaunoda backlinks:
Kukurukurirana nevanhu vane hutano hwemaInternet, mawebsite, uye mapuratifomu mumashandi enyu;
Kuenzanisa zvakakodzera uye zvakakwirira-kutsvaga mazwi ekutsvaga.
Google inoongorora mawebsite nePeRank algorithm. Iyi Google algorithm inoshandisa backlinks kubva kune mamwe mabhuku ane kodzero yekuona kuti peji yepamusoro inozivikanwa, simba, uye zvakakosha. Iyi algorithm inokonzera zvakananga nzvimbo yewebsite panzvimbo yezvitsvakurudzo zvekutsvaga uye inobudisa mukurumbira webhutori mumaso maGoogle.
Tsvaga nzira yakatarwa
Sarudzo yakajeka inokosha kune avo vanoda kuda kuvaka. Iwe unofanirwa kutungamirira chinangwa kunze kwega backlink imwe neimwe. Zvimwe zvisingaiti, mhirizhonga iyi yose nemabasa aunoisa mairi hazvina maturo. Saka, kukubvunza mubvunzo nezvechinangwa chei unoda kubatana? Mhinduro yakajairika uye inonzwisisika kumubvunzo uyu ndeyekutengesa kwemigwagwa. Migwagwa inoreva kuti vamwe vangave vatengi vachatsvaga panzvimbo yako uye zvichida kutendeuka mukubhadhara vatengi. Kutsanangura chinangwa chako kunotanga nemukana wekutsvakurudza. Iwe unofanirwa kutsvakurudza kuti ndeapi mikana iri mukati memichero yako uye kuti ungabatsirwa sei navo.
Kuongorora nzvimbo yako yemazuva ano, mawebvu anowanikwa kwauri, uye kugadzira chirongwa chekuvandudza. Nokuita izvo iwe uchakwanisa kukudziridza hurongwa hwekuvaka chikwata chako Source .